maty – Page 3 – Midi Madagasikara
Ambohimanarina : Lehilahy lehibe maty novonoin’ny jiolahy tao an-tranony
Redaction Midi Madagasikara 2 janvier 2014 Ambohimanarina, an-tranony, maty
Nitrangana fanafihan-jiolahy teny Ambaravarankazo – Ambohimanarina ny alin’ny 31 desambra. Tokantrano iray izay mpiompy vorona no notafihan’ny andian’olona vitsivitsy. Raha ny fantatra dia mpivady efa lehibe no mipetraka ao amin’ity tokantrano ity. Tamin’io alin’ny 31 desambra io dia nizara roa izy mivady, ka ny iray tany amin’ny efitra ilany nisy ny vorona sasany no natory,…
Antanimena : Hain-trano, ramatoa lehibe 60 taona maty kilan’ny afo
Redaction Midi Madagasikara 27 novembre 2013 Antanimena, Hain-trano, kilan’ny afo, maty
Nisehoana hain-trano roa teto amin’ny faritry ny renivohitra, omaly. Tsy mbola fantatra izay antony nahatonga izany hatramin’izao Ramatoa lehibe iray 60 taona no fantatra fa maty may kilan’ny afo tetsy Ambohibary Antanimena, omaly. Nirehitra mantsy ny trano nipetrahany. Tokony ho tany amin’ny 1 ora sy sasany tany ho any, taitra ny manodidina nahita setroka be…
Redaction Midi Madagasikara 27 novembre 2013 BESARETY, Dahalo, filaminana, Fitohanan’ny làlana, Itaosy, Mahitsy, matin’ny dahalo, maty, Soavimbahoaka, voadonan’ny fiara, zandary
# Fitohanan’ny làlana, mila masiaka ny mpitandro ny filaminana. Ampiharina ny lalàna ary mila masiaka raha ilaina izany. Be loatra mantsy ny baranahany momba ny fifamoivoizana : ny fijanonana eny amin’ny sisin-dàlana, ny kortezin’ny manam-pahefana izay tsy maintsy mahazo làlana fotsiny tsotr’izao, ny tsy fanarahana ny fenitry ny fifamoivoizana (code de la route). Tsiahivina fa…
Ambohimandroso : Pasitera voatafika, maty novonoin’ny jiolahy ny vadiny
Redaction Midi Madagasikara 27 novembre 2013 Ambohimandroso, maty, Pasitera voatafika
Ny alin’ny alatsinainy teo tamin’ny 1 ora maraina, notafihana jiolahy valo nitondra fitaovam-piadina maro samy hafa ny tranona pasitera iray tany amin’ny tanàna antsoina hoe Ambodivona Andrambiazina any Ambohimandroso. Vokatr’izany, maty notsatohan’ireo olon-dratsy antsy teo amin’ny fony ny vadin’ity mpitandrina ity, nampijaliana ihany koa ny zanany vavy kely vao herintaona sy tapany monja. Nasiany antsy…
Ampanihy Andrefana : Dahalo 4 maty voatifitry ny Zandary
Redaction Midi Madagasikara 25 novembre 2013 Ampanihy, Dahalo, maty
Mbola tsy milamina mihitsy hatramin’izao raha ny asan-dahalo any amin’iny faritra Atsimo Andrefana iny no asian-teny. Vokatry ny fifandonana teo amin’ny mpitandro filaminana sy ireo malaso an-jatony nirongo basy sy zava-maranitra, nanafika tao amin’ny kaominina Berohy Atsimo, ka nahaverezana omby 540 niampy basim-borona roa.Dahalo efatra no maty voatifitry ny zandary, nandritra ny fanarahan-dia niaraka tamin’ny…
Tsiroanomandidy : Mpianaka nandeha môtô maty nisy nitifitra
Redaction Midi Madagasikara 23 novembre 2013 maty, nisy nitifitra, Tsiroanomandidy
Tamin’ny alakamisy lasa teo, raha handeha hody avy namonjy tsena ny mpianaka dia nisy nitifitra teny an-dàlana tambonin’ny môtô nentiny. Tamin’ny 6 ora hariva tamin’izay. Teo amin’ny toerana antsoina hoe Ambalanirana any Tsiroanomandidy no nisehoan’izany. Nirefotra ny basy, avy hatrany dia nipitika izy ireo. Naratra avokoa izy mianaka fa ilay raim-piankaviana no tena voa mafy…
Ambatofotsy : Lehilahy iray maty novelesina tamin’ny hazo
Redaction Midi Madagasikara 22 novembre 2013 Ambatofotsy, maty, novelesina hazo
Lehilahy lehibe iray no fantatra fa maty noho ny vely hazo nahazo azy teo amin’ny lohany. Tamin’ny alarobia hariva, tokony ho tany amin’ny 7 ora tany ho any, niaraka nisotrosotro ny lehilahy roa teny amin’ny tetezana Ambatofoty. Voalaza fa mpinamana ihany izy ireo. Ny iray efa somary zokiny, satria eo amin’ny 43 taona eo, ny…
Talatamaty : Maty voatifitra ny zanaky ny tompon-trano
Redaction Midi Madagasikara 21 novembre 2013 maty, Talatamaty, voatifitra
Niteraka fahafatesan’olona indray ny fanafihan-jiolahy teto an-drenivohitra. Tokantrano iray etsy Faralaza, fokontany iray ao amin’ny kaominina Talatamaty, no nataon’ny olon-dratsy lasibatra ny alin’ny talata teo. Raha ny fanamarihana azo teny an-toerana dia 15 lahy raha kely indrindra no isan’ireo mpanafika. Nitondra basy “kalachnikov” dimy ihany koa izy ireo, ankoatra izay tsy hitan’ny maso. Voaporofo tanteraka…
Fihinanana antsantsa : Niampy telo indray ny maty
Redaction Midi Madagasikara 20 novembre 2013 Fenerive Est, Fihinanana antsantsa, maty
Araka ny vaovao azo avy any an-toerana dia fantatra izao fa niampy telo indray ny isan’ny olona namoy ny ainy vokatr’ilay fihinanana henan’antsantsa tany Mahasoa, Fenerive-Est. olona mpianaka ary iray trano ireto namoy ny ainy ireto. Efa andro vitsivitsy izay no efa tsy nahatsiaro tena izy ireo ary dia izao niafara tamin’ny fahafatesana izao. Na…